काठमाडौं र जिन्दगी
महिनाको अन्तिम दिन घरबेटिको खोकी सुनेर तर्सिन्छौ हामी, अनि महिनाको अन्तिम हप्ता पैसा सापटी लिएको हितेशीसँग तर्किन्छौ ।
भनिन्छ काठमाडौं सपना र रहरको शहर हो । तर हैन रहेछ । यो बाध्यता र बिवशताको शहर हो । शायद यहाँबाट धेरै मान्छे उम्कन चाहन्छन् तर सक्दैनन् । प्रायले यसलाई स्थाई थलो मानेका हुँदैनन् । कोही यहाँ दाम कमाउन छिरेका छन् कोही नाम कमाउन । कोही डिग्री बढाउन, कोही डिभी भराउन । कोही घडेरी बेचाउन, कोही दुःख बेसाउन । काठमाडौं ट्रान्जिट पोइन्ट हो । घर नहुने मध्यवर्गीय ब्यक्तिले काठमाडौंमै दीर्घरुपले बस्छु भनेर अड्डी कसेको हुँदैन । दुईचारवटा घर काठमाडौंमा भएकाहरुपनि एउटा घर अरु कुनै ठाँउमा किन्न लागिपरेका हुन्छन् । बुढेसकालमा आफु बस्नँ । पैसा र अलि अलि दिमाग हुनेहरुनै काठमाडौंकै खाल्डोमा रहेका दुतावासका कार्यालयमा भिजा लगाउन धाईरहेका हुन्छन् । उनीहरुको रोजाइ युरोप, अमेरिका वा अस्ट्रेलिया हुन्छ । पैसा अलि कम हुनेहरुपनि म्यान्पावरको लाइनमा पंक्तिबद्ध छन । बिदेश जाँदै नजाने मजस्ता अक्कडेहरुले एउटा खुट्टा उचालेरै काठमाडौंलाई झेलेका छन् । जसलाई भित्रैदेखि काठमाडौं बस्ने मन छैन र यो ठाउँ छोड्न हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि केही उपाय नलागेकाहरुको खुट्टापनि एउटा उचालिएकै छन् । यहाँ घर बनाएर जहान परिवार पाल्न सक्ने दुरदुरसम्म संभावना छैन, अनि दुराशापूर्ण कोठे जिन्दगी जीवनपर्यन्त भोग्न सकिन्न भन्ने भय पनि छ । तसर्थ आफ्नो काम पुरा हुनासाथ वा कुनै उद्देश्य पुर्ति हुनासाथ कुलेलाम ठोक्न एउटा खुट्टा उचालेर तम्तयार भएर बसेका मजस्ता मानवप्राणीहरु धेरै छन् काठमाडौंमा ।
खुट्टा उचाल्नै पर्ने कारण अनगिन्ती छन् । काठमाडौंमा शान्ति छैन, पानी छैन, स्वच्छता छैन । नभएका चीजहरुको सुची तयार गर्ने जाँगर पनि छैन । किनकी लिस्ट त्यति लामो छ । भागदौड, तछाडमछाड, कोलाहाल र धुवाँछारोको कुइरिमण्डलमा मान्छेका झुण्डहरु पिल्सिएका छन् । कसैलाई रोक्किएर पछाडि हेर्ने फुर्सद नभएझँै । कसैलाई अफिस भ्याउने चटारो, कसैलाई पसल खोल्ने भ्याँउतो । कोही दुई मिनेट अघि जान पाए १ प्लेट भएनि बढी मम बेच्थें भन्ठाँन्दै हुर्रिन्छन् । कोही अलि छिटो हाँक्न पाए दुई जना भएनि बढी पेसेन्जर हाल्न पाँइन्थ्यो भनेर हुत्तिन्छन् । यो अस्तब्यस्तता बिच एउटा स्वस्थ मान्छेलाई चाहिने कुनै पनि चीज छैन यहाँ । यहाँ केवल भौतिकता र कृतिमताका सुविधा र सहुलियतहरु छन् । मान्छेले नै पैदा गरेका आवश्यकता पुरा गर्न काठमाडौं धाउनु पर्छ मान्छेलाई ।
एक दिन युरोप लामो समय बसेर आएको साथीसँग काठमाडौंको सडकमा हिँड्दै थिएँ । एउटा स्कुटीको साइड ग्लासले उस्लाई बेस्सरी हानेर अलप भयो । ऊ रन्किनसम्म रन्कियो र भन्यो – “काठमाडौँ मान्छे बस्ने ठाउँ हैन । यो शहर हैन । यो सुङ्गुरको खोर हो, झुपड्पट्टी हो । शहरमा त कम्तिमा सडकको छेउ पैदलयात्री हिंड्ने ठाउँ हुन्छ । शहरमा त कम्तिमा ५ मिनेट हिँडिसकेपछि गार्डन वा पार्क हुनुपर्छ । यहाँ त भएका पार्क र हरियालीलाई सखाप पार्दै मानबिय संरचना बनाइन्छ । काठमाडौंलाई चिरेर बग्ने पवित्र नाम बोकेका नदीहरु मानव मल्मुत्रका डुङ्डुङ गनाउने ढल बनेका छन् । हामीले हामी बस्ने ठाउलाई मरुभुमी बनाउदै छौ र भन्ठान्छौ बिकासले गति लिँदै छ ।”
मान्छे बस्ने शहर देखेर आएको हुनाले मेरो साथीले त्यतिसम्म भन्न सक्यो । नमरी स्वर्ग देखिदैन भन्छन् उस्ले देखेर आएको होला त नि भन्ठानेँ । हुनत बाध्यताको भड्खाारोमा काठमाडौं जस्तो बिशाल शहर मैले अरु देखेको पनि छैन । एउटा स्कुटरले छोएर जाँदा साथीको कन्सिरीको राँै तात्यो तर त्यो हाम्रा लागि अति सामान्य भईसके । आखिर काठमाडौंमा बाँच्नु छ भने सहन सिक्नु पर्छ । माइक्रोमा पेल्लिन सक्नु पर्छ, गल्लिमा लुटिन सक्नु पर्छ । बिहान घरबाट हिंडेको मान्छे बेलुका धुलोले चिन्दै नचिनिने गरी फर्कदा हामीलाई रिस उठ्दैन । मास्क लगाएर हिँड्दा पनि बच्चाहरुलाई दम र खोकीले ग्रस्त पर्दा हामी रन्किदैनाँै । साँझ–बिहान हिँड्दा हिँड्दै सडककै छेउछाउमा तार, ढल वा खानेपानीको लागि हप्तौँदेखी खनिएको ठुलो खाडलमा परेर खुट्टा मर्किदा पनि हामी आफ्नै भाग्यलाई सराप्नँ लाचार छाँै । खुट्टा घिसारेरै भएपनि आफ्नो गन्तब्यमा पुगेर छोरा, श्रीमान वा अविभावकको भूमिका निभाउनु छ । आशातीत अनुहारमा एउटा चोकोपन, एक किलो चामल र एक पाउ आलुले खुशीयाली ल्याउनु छ । अनि त्यही सन्तुष्टीले आफ्नो पनि भोक मेटाउनु छ ।
काठमाडौंबासीहरुमा सहनशीलताको भकारी नै छ । सकभर अफ्ठेराहरुलाई छलेर भाग्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छाँै हामी तर समस्याहरुपनि हामीलाई नै पिछा गरिरहेका हुन्छन् । भाग्ने क्रममा कहिले हामी ठग ब्यपारीको जालमा पर्छौँ, कहिले ट्राफिकको जरिवानामा, कहिले दलालको पन्जामा त कहिले पाकेटमारको फन्दामा । आफु जोगिन पनि मुश्कील छ यहाँ, आफुले आर्जेको जोगाउन पनि हम्मेहम्मे छ । महिनाको अन्तिम दिन घरबेटिको खोकी सुनेर तर्सिन्छौ हामी, अनि महिनाको अन्तिम हप्ता पैसा सापटी लिएको हितेशीसँग तर्किन्छौ । काठमाडौँको रहनकहनमा ढल्नै पर्यो ।
तसर्थ बाध्यता र विवशताको हुरिले जब जब कसैलाई काठमाडौं खाल्डोमा हुत्याँउछ तब तब जिन्दगीमा सम्झौताहरु चाङ् लाग्छन् र सहनशीलताको मुल झन झन रसाएर आँउछ ।
This article was published in paper print of Saptahik,aKMG's weekly portal on 7th June 2019 (Jestha 24, 2076).
बिशाल भुमन्डलमा नश्वर जिन्दगी असंख्य डेराहरु सरिरहने आस्थाई डेरावाल हो । जिन्दगीले कहिले मेचीबाट महाकाली डेरा सार्छ, कहिले त्यहाँबाट काठमाडौं । कहिले कोटेश्वर, कहिले इन्डिया त कहिले दक्षिण अमेरिका । डेरा सर्दासर्दै जिन्दगीले यो भुल्दछ कि यो जगत नै उस्का शरीरका लागि एउटा अघोषित डेरा थियो, कि यो पृथ्वी सकल प्राणीहरुको अनन्तकालसम्मको आस्थाई थलो हो । क्षण, दिन, सप्ताह, महिना र वर्षहरु बिस्तारै बित्दै जाँदा दशक तथा सिल्भर, गोल्डेन र डायमण्ड् जुबिली हुत्तिएर मृत्यु आफुलाई स्पर्श गर्न आईपुगेको कसैलाई थाहै हुँदैन । दिनानुदिनको परिवर्तन नगन्य लागेता पनि डायमण्ड् जुबिलीमा पदार्पण गर्दा आफुले भोगेका र देख्दै आएका परिवर्तनहरु एकाकार गर्ने हो भने आफु बेग्लै ग्रहमा उभिएको जस्तो महशुस हुन सक्छ । १० बर्षको छँदा जुन मेरो डेरा थियो, अहिले दुई दशकको अन्तरालपछि एकै पटक दर्शन गर्ने हो भने बिल्कुल नौलो भैसक्यो । अब यहि डेरा आगामी असी बर्षमा कस्तो होला? थप असी बर्षमा कस्को होला?
पर्यटक हैन यात्री
डिसेम्बर ३१ मा मेरो नाममा अमेरिकाबाट एउटा पार्सल् आयो । नयाँ बर्षको शुभकामनास्वरुप उस्ले मिठाई पठाएकी रहिछे । यस्पाली ऊ फिजिमा छे । मिठाई चपाँउदा चपाँउदै उसङ्गको भेटघाट ताजा भएर आँउछ । कहिलेकाँही आफ्नो पर्यावरण र संस्कृतिभन्दा फरकको नयाँ साथी बनाँउदा जीवनलाई अर्कै कोणबाट चिहाँउने अभुतपूर्व अवसर पाँइन्छ । यो नियात्रा संस्मरणमा म एउटा यस्तै बेग्लै परिवेश र कथा बोकेकी बिल्कुल नौलो साथीले मेरोलागि ओझेलमा रहेका बिषयलाई कसरी प्रकाश छरिदिई भन्नेबारे प्रसंगसहित चर्चा गर्नेछु । केही बर्षअघि मनास्लु क्षेत्रको पैदलयात्रा (ट्रेकिङ) जाँदा उसंग भेट्ने संयोग मिल्यो । बनाँउछु भनेर बनाएको साथीभन्दा घटना र ब्यथाको संयोगले बनेका साथी बढी घनिष्ठ हुन्छन् । नयाँ बर्षको समय थियो । चिसो मौसममा जिन्दगीको गियर बदल्न हामी पहाडतिर उकालो लागेका थियौँ । “मलाई भिडहरुबाट टाढा जानु थियो । जब मान्छे एउटै काममा लामो समय लीन हुन्छ, उस्को दिमाग बोधो हुन्छ । तर यो सब किन हुन्छ होला?” प्रश्नको वाँण मतिर सोझियो । “एकनासे काम त मेसिनले गर्छ, मान्छे मेसिनभन्दा फरक छ” मैले भने । हो म मेसिनबाट मान्छे हुन नेपाल आएको । यो ठाँउको